विमला गुप्ता/वीरग‌ंज, १९ पुस ।
मध्यतराईमा अहिले शीत लहर शुरु भएको छ । बिहानैदेखि हुस्सु लागेर घाम नलाग्दा चिसो बढ्दा जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ । हुस्सुसँगै हावा चलेर अत्याधिक चिसो हुँदा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरुलाई समस्या भएको छ । शीतलहरका कारण बजारमा मान्छेको चहलपहल पनि निकै कम भएको छ । चिसो बढेसँगै अस्पताल तथा निजी क्लिनिकहरुमा बिरामीको चाप उत्तिकै बढेको छ । चिसोमा खासगरी रुघाखोकी, कोल्ड डाईरिया, भाईरल फिबर लगायतका रोगहरु लाग्ने संभावना बढी रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । यस्तो बेला न्यानो कपडा लगाउने, बासी खानेकुराहरु नखाने, तातो र झोलिलो पदार्थ बढी पिउने तथा सरसफाईमा ध्यान दिन पनि चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
साना–साना बालबालिकाहरुलाई चिसोबाट बचाउनका लागि विशेष ध्यान दिन र तातो खानेकुरा बढी खुवाउन स्वास्थ्यकर्मीहरु सल्लाह दिन्छन् । शीतलहरबाट बच्नकालागि विशेष सतर्कता अपनाउन पनि उनीहरुको सुझाव छ । जाडो भनेपछि चिसोको मौसम भन्ने बुझिन्छ र यस्तो मौसममा स–साना बालबालिकाहरुको स्वास्थ्यको हेरविचार गर्न पनि एकदमै आवश्यक हुन्छ । किनभने यस्तो मौषममा एलर्जि हुने, भाइरसको संक्रमण हुनुका साथै रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कमजोर हुने हुँदा बालबालिकामा विभिन्न रोग तथा समस्याहरु देखा पर्ने गर्छन । जस्तै श्वाशप्रश्वास सम्बन्धी समस्या रुघाखोकी कफ हुनु, निमोनिया, ब्रोनकाइटिस जस्तो समस्या हुने गर्द । बालबालिकामा हुने यस्तो समस्यालाई समयमै उपचार नगराइए जटिल समस्या उत्पन्न भई ज्यान समेत जान सक्ने बालरोग विशेषज्ञहरुको भनाई छ ।
जाडोले बच्चा बिरामी भएपछि अस्पतालमामा उपचार गराउन आएकी बारा खुटुवा प्रसौनीकी प्रिंयका देवीले आफ्नो पीडा सुनाउदै भन्नुहुन्छ “बच्चालाई चिसोले पखाला हुन थाल्यो एक पटक बान्ता पनि भयो, हल्का ज्वरो पनि थियो, छोराले अचानक दूध खान छोडेपछि मैले हस्पिटलमा लिएर आए अनि यहा डक्टरले चेकअप गरेर भन्नुभयो कि बच्चालाई कोल्ड डाइरीया भएको छ ।”
जाडो मौसममा बालबालिकाहरुमा विभिन्नखालका रोगहरु देखा पर्ने गर्छ । सा–साना बालबालिकाहरुमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा उनीहरुलाई छिटो रोगको संक्रमण हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई घरमै पनि सुरक्षित किसिमले हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई सन्तानकि आमा वीरगन्ज पानी टंकी निवासि सावित्री रोका भन्नुहुन्छ “बच्चालाई घरमै राम्ररी हेरबिचार गरे चिसोबाट हुने समस्या बाट जोगाउन सकिन्छ, अहिलेको समयमा बच्चालाई तातो र ताजा खाने कुरा खान दिनु पर्दछ । आमाले बच्चाको सरसफाईमा पनि ध्यान दिनु पर्छ सधै ननुहाई दिएपनि मनतातो पानिमा डिटोल हालेर जिउ सफा गरिदिएर मात्र लुगा लगाईदिनु पर्दछ । दुध चुसाउने आमाले आफ्नो खानपानमा ध्यान दिनुका साथै एक/डेढ घण्टाको अन्तरालमा बच्चालाई आफ्नो दुध खुवाउने गर्नुु पर्छ ।
तुलसी, मह जस्ता घरायसी खाने कुरा खान दिनु पर्दछ । जाडोमा न्यानो पार्नकालागि धेरै लुगा लगाइ दिएमा, फोहोर लुगा लगाइदिएमा पनि बालबालिकाहरु बिरामी हुने सम्भावना हुन्छ । खासगरी जाडोमा बालबालिकामा कस्तो खालको रोग बढी देखा पर्छ र जाडोबाट कसरी बँच्ने भनेर साझा सहकर्मी विमला गुप्ताले बरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. अशोक दास सगं गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
१) बालबालिकामा अहिले चिसोको कारण कस्तो समस्या बढि देखा परिरहेको छन् ? तपाईले उपचारका क्रममा के भेट्नु भएको छ ?
जाडोमा प्रायः बालबालिकामा निमोनिया रुघाखोकि जस्तो समस्या देखा पर्ने गर्दछ तर आहिले फैलिएको रोग कोल्ड डाइरिया (झाडापखाला) हो । यो ६ महिना देखि २ वर्ष सम्मका बालबालिकामा विशेष हुने गर्दछ । यो समस्या सरसफाईको कमिले, हात सफा नगरि मुखमा लगाउने (चुस्ने), फोहोर हातले खानेकुरा खाने जस्ता कारणले हुने गर्दछ र ६ महिना देखी मुनिका बालबालिकामा निमोनियाको समस्या हुने गर्दछ । निमोनिया हुनुको कारण बच्चाहरुको नाक मुख सफा नगर्नाले । धेरै लुगा लगाई दिनाले पसिना आएर जिउमै सुख्ने हुन्छ जुनकि एकदमै नराम्रो हो । यस्ले बच्चामा श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या हुने डर पनि हुन्छ ।
२) हिटरको प्रयोग र चिसोबाट बच्न जलाइने घुरको धुवाँले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ ?
गाउघरमा विशेष गोइठि जलाइन्छ । जुन स्वास्थ्यकोलागि एकदमै हानिकारक हुन्छ । यसमा फिल्टर हुदैन । साथै कुनै सिस्टम पनि हुदैन । जस कारण धुवा–धुलोको कणले गर्दा बालबालिकाका साथै ठुला मान्छेमा पनि श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या हुने डर हुन्छ । धुवाले पनि खराबि गर्छ । तर सकेसम्म आगो ताप्दा धुवा आफुतिर नआइदेओस त्यो तरिकाले बसिदिनुपर्छ । न्यानोको लागि आगो ताप्नु ठिक हुन्छ तर सावधानीका साथ आगोनिर बस्नु पर्छ । नत्र पोल्ने आगो लाग्ने डर हुन्छ ।
हिटर जलाउदा ड्राई हिटर पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि लाभदायी हुदैन । बाल्नु नेै पर्यो भने हिटरको माथि एउटा सानो भाडोमा पानि राखेर बाल्ने गर्नु पर्छ । यसरी पानि उम्लेर बाफ रुमभरि फैलिन्छ जुन हाम्रो स्वास्थ्य को लागी लाभदायी हुन्छ । यसले कोठाभरी मोइश्चर मेन्टेन गर्न मदत गर्छ । जसरी कुलर र एसीमा फरक हुन्छ त्यतिकै यो विधिले फरक पर्न जान्छ ।
–बाटोमा उड्ने धुलो, चुल्होबाट निस्कने धुवाँ, चिसोबाट बच्न जलाइने घुरको धुवाँ गुइठाको धुवाँले पनि बालबालिकामा श्वाशप्रश्वास सम्बन्धि समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । जाडोमा रोगबाट बच्नको लागि सरसफाईमा बढी ध्यानदिन चिकित्सकहरुको सुझाव छ । बालबालिका मात्र होईन, धुवाँधुलोमा हिँड्दा माक्स लगाउने, मनतातो पानीखाने, सरसफाइमा ध्यानदिने साथै चुरोट नखाने गर्नाले ठूला व्यक्ति पनि श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट बच्न सक्ने डाक्टरहरुको भनाइ छ । त्यसैले जाडो मौसममा स्वस्थ रहन सबैले सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।